| 283 njegharị
Na-abata na Delhi ọdụ ụgbọ elu / ọdụ ụgbọ elu, bulie & nyefee na Corbett. National Park site n'okporo ụzọ (300 kms / 6-7 hrs). Na-abịarute ma na-aga ebe izu ike gị na-ehi ụra nke ụbọchị ahụ bụ oge ntụrụndụ maka ihe omume gị, n'otu ntabi anya na mpaghara
N'isi ụtụtụ a, na-enwe egwuregwu egwuregwu n'ime ogige site na jeep iji lee ụfọdụ n'ime anụ ọhịa kachasị mma na osisi & ugbo. N'ehihie a, gaa n'ihu maka egwuregwu ọzọ na-ekiri ụgbọala & gbalịa ịchọta ịchọta agụ. Nri abali na oge ezumike, n'abali n'abali
N'ụtụtụ ụtụtụ mgbe ị risịrị nri ụtụtụ, a ga-ebuga gị na Nainital, Dọọ n'etiti nnukwu osisi ndị dị n'elu oké ọhịa nke osisi pines na osisi deciduous (116 kms / 2-3 hrs). Bịa ma gaa ụlọ nkwari akụ gị. N'ehihie a, ị ga-aga maka njem nlegharị anya na Nainital, gaa na Naini elu ma mesịa nwee ọhụụ ụgbọ elu ma ọ bụ na-enwe mmasị ịnya ụgbọ mmiri na Naini Lake, n'otu ntabi anya na nkwari akụ ahụ.
Taa, ị ga-eleta ụfọdụ n'ime ọdọ mmiri kachasị mma nke mpaghara, gaa na Bhimtal, Naukuchiyatal. Mgbe e mesịrị ụgbọala gaa Ramgarh. Oge ezumike dị na oge ntụrụndụ maka ịzụ ahịa na ọrụ ọ bụla, n'otu ntabi anya na nkwari akụ ahụ
N'ụtụtụ a, a ga-ebufe gị na Kausani (114 kms / 4-5 hrs). Bịa ma gaa ụlọ nkwari akụ gị. N'ehihie a, gaa na ụlọ ọrụ Tea ka ị hụ usoro nhazi nke Tea. Ezumike nke mgbede bụ na ntụrụndụ, n'otu ntabi anya na nkwari akụ
N'ụtụtụ a ị ga-ebuga Auli site na Joshimath (255 kms / 9 - 10 hrs). Mgbe ị rutere, rute n'ọdụ ugwu gị site na eriri eriri. Ezumike nke mgbede bụ oge ezumike maka ọrụ nke ọ bụla, n'otu ntabi anya na nkwari akụ
Mgbe ị na-eri nri ụtụtụ nke mbụ, ị ga-aga Rudraprayag, aha ya bụ Onyenwe anyị Shiva (Rudra). A na-enye akụkụ dum nke Rudraprayag ezigbo ịma mma, ọdọ mmiri & glaciers (140 kms / 5 - 6 hrs). Bịa ma gaa ụlọ nkwari akụ gị. Oge ezumike na-anọ na ntụrụndụ maka ọrụ ọ bụla, n'otu ntabi anya na nkwari akụ ahụ
Ụbọchị a bụ oge ntụrụndụ iji gaa na ụlọ nsọ dị na Rudraprayag ma ọ bụ na-ezu ike na ụlọ nkwari akụ gị ma nwee mmasị na ebe ndị mara mma dị na Rudraprayag, n'otu ntabi anya na nkwari akụ
Mbido ụtụtụ nke ụtụtụ a n'obodo Haridwar dị nsọ (160 kms / 6 - 7 awa). Bịa ma gaa ụlọ nkwari akụ gị. Oge ezumike n 'oge ezumike iji gaa Ganga ghats na ụlọ nsọ, n'otu ntabi anya na nkwari akụ
Taa, a ga-esi na ya gaa Delhi (240 kms / 6-7 hrs). Bịa ma gaa n'ọdụ ụgbọ elu / ọdụ ụgbọ okporo ígwè maka njem gị.